Ụlọ mposi (ebe ịsa ahụ) acrylic Mpempe akwụkwọ, China Sanitary (Bathtub) Acrylic Sheet Manufacturers, Suppliers, Factory - Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd.
>lọ>Product>Sanitary (Bathtub) Acryli Mpempe akwụkwọ
Sanitary acrylic bụ ihe sịntetik pụrụ iche, nke emepụtara iji rụpụta ebe ịsa ahụ. N'ihi nguzogide ha na kemịkal na nhicha, akwa acrylic ịdị ọcha bụ nhọrọ kachasị mma maka ịsa ahụ, trays ịsa ahụ. Ala acrylic dị ntakịrị ma na -adịgide. Ọ na -enye ogologo ndụ, nlekọta dị mfe yana ihe dị ọcha maka ịsa ahụ.
A na -echebe otu ihe nkiri PE doro anya thermoformable, na -enye ohere ijikwa nchekwa n'oge okirikiri nrụpụta zuru oke, n'ime ọnọdụ ọrụ ụlọ ọrụ.
Ụdị nha anyị na nhọrọ ọkpụrụkpụ ga -enye ndị ahịa nhọrọ ndị ọzọ.
Product aha Ebe nchekwa ihe ọcha Acrylic mpempe akwụkwọ/mpempe akwụkwọ acrylic maka ịsa ahụ/efere ịsa/efere/trays ịsa ahụ.
ụdị Nkedo (Cell Nkedo)
ndọda 1.2g / cm3
Oke (mm) 2mm - 5mm
Ike Production 2000 tọn/ọnwa.
agba acha ọcha, odo, aja aja, Ivory, ect..38 agba ọkọlọtọ, enwere dị
mbukota Otu akụkụ ihe nkiri PE na -eguzogide okpomọkụ
size 1900 X 960mm, 1780 X 960mm, 1250 X 2050mm, wdg karịa nha 50
Asambodo OA, ISO 9001, RoHS
MOQ 500 n'arọ.
Ajụjụ: Kedu ka ị si ebu ya?